လူသားအားလုံးအတွက်: တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတုတ္ထအကြိမ် ပင့်ဆောင်ကာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် အပူဇော်ခံမည်
Posted by နေဇော် လင်း at 6:36 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အားမရသေးဘူးကွာ ထပ်ရေးမယ်။ ကဲ...... ဟိုးတရုတ်ပြည်ကြီးက ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆွယ်တော်ကို ဘာ့ကြောင့် ပင့်ဆောင်ရသလဲ။ မြန်မာပြည်မှာရော မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓါတ်တွေမွေတော်တွေ မရှိတော့ဘူးလား။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကို ဖူးမျှော်မှ ပိုကုသိုလ်ရမယ့်လို့ဘယ်နေရာ ဘယ်ကျမ်းဂန်မှာ ပါခဲ့ဖူးသလဲ။
စာချုပ်ချုပ်ပြီးပင့်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က ဒီ ဆိုက်ဝါး အစီအစဉ်ကို လက်ခံလို့တရုတ်ရဲ့ ဧရာဝတီ ဖျက်ဆီးရေး အစီအစဉ်မှာ ချောမွေ့အောင်မြင်စေရေး လိုက်လံ သဘောတူညီပေးနေမှန်း သိသာနေတယ်။
ဧရာဝတီနဲ့ခု ဆွယ်တော်ကိတ်စမှာ ကျနော်အမြင်များ တင်းမာနေခဲ့ရင် ထောက်ပြကြပါ....။
ငါ့ကော်မန့် တစ်ခု ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်........ ??????
(((ဘာသာရေးကိတ်စမို့မပြောချင်ပေမယ့် အဲ့ဒါ ဆိုက်ဝါးတွေပဲ...... ငယ်ငယ်ကလည်း အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ
တရုတ်ကို လူတွေ မုန်းစိတ်မ၀င်လို့ဆက်ခံနေ၇တာ
မြန်မာတွေရဲ့ ဘာသာရေး ယုံကြည် သက်ဝင်မှုကို ခုတုံး လုပ်ကြတော့မယ်ထင်တယ်
ငါမြင်တာ တော့ အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။)))
ဒီလိုရှိပါတယ် ကိုအလင်းစက် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စွယ်တော်ကို တရုတ်ပြည်က ပိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ရှုထောင့်တစ်ခုကနေ ဟုတ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် သူတစ်ဦးတည်းပိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ... တစ်ကယ်တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓါတ်တော်တွေနဲ့ တရားတွေဟာ လူသားမျိုးနွယ်တင်သာမက ၃၁ ဘုံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်သော အမွေဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့် အမြင်အားဖြင့် ဆိုလျှင်ဖြင့် မြန်မာပြည်၏ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင် အားလုံးသည် ထေရ၀ါဒ အစစ်အမှန်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိသူသည် ၁၅ ရာနှုန်းလောက်သာ ရှိပါလိမ့်မည်။ ယခု စွယ်တော် ကိစ္စဟာ သဒ္ဓါများပြီး ပညာရှားတဲ့ ယုံကြည်သူ လူတန်းစားတစ်ရပ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လိုချင်တာကို လှည့်ဖျားခြင်းဖြင့် ဆောင်ခြင်း သဘောလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အရာရာဟာ အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲခြင်း များတတ်ပါတယ်။
တရုတ်တွေ စွယ်တော်ပိုင်တာ မပိုင်တာ အသာထား၊ ကိုယ်လဲ မလိုချင်ပါဘူး၊ စွယ်တော် ပိုင်ဆိုင်မှ ထေရ၀ါဒ စစ်မှာလဲ မဟုတ်၊ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အမွေကို ခွဲဖို့ကြိုးစားခြင်းလည်း မဟုတ်၊ ထေရ၀ါဒ စစ်ခြင်း မစစ်မှန်ခြင်းကို ငြင်းခုန်ဖို့ လည်း မဟုတ်ပါဘူး ကိုမိုးယံ။ အဓိကပြောချင်တာ မြတ်စွာဘုရားကို ခုတုံးလုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့ တရုတ်နဲ့ကိုယ့်ဆီက လူတစ်ခုရဲ့ အကြံကိုသာ ပြောခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေး ရေးပေးဖို့ တက်ဂ် tag ထားတယ် မိုးယံရေ ... :P